Blockchain समाचार 16.05.2018 - Blockchain समाचार
सक्छ 16, 2018 व्यवस्थापक
नयाँ blockchain ETF NYSE मा शुरूआत
नयाँ blockchain विनिमय-कारोबार कोष बुधवार शुरू भएको न्यूयोर्क स्टक एक्सचेन्ज मा.
को ETF (BKC) को साझा धारण 32 cryptocurrencies काम कम्पनीहरु वा तिनीहरूको अन्तरनिहित blockchain प्रविधि. को ETF Rex शेयर द्वारा चलाउन र सक्रिय ब्रायन केली व्यवस्थित, BKCM एक CNBC योगदानकर्ता र टाउको, जो ग्राहकहरु लागि डिजिटल सम्पत्ति रणनीति चल्छ.
यो कोष पनि वर्ग र chipmaker विकसित माइक्रो यन्त्रहरू को साझा धारण.
फ्रान्सेली वित्त मन्त्री उहाँले cryptos बारेमा भावुक छ भन्छन्
फ्रान्सेली वित्त मन्त्री, ब्रुनो Le Maire, उहाँले स्पेस आफ्नो छ घोषित रूपमा समर्थन गुप्त outspokenly गर्न सबैभन्दा वरिष्ठ युरोपेली आधिकारिक भएको छ "कुल र समर्थन निर्धारित।"
Le Maire हालै भन्नुभयो, कुनै न कुनै अनुवाद अनुसार:
"म एक वर्ष पहिले नयाँ थियो, तर अब म भावुक छु. यो एक वर्ष मलाई लाग्यो. हामीलाई फ्रान्स युरोप मा blockchain र गुप्त-सम्पत्ति नवीनता लागि पहिलो स्थान बनाउन सँगी नागरिक शिक्षित होस्। "
Coinigy सदस्यता आधारित गुप्त व्यापार अनुप्रयोग शुरूआत
Coinigy, बादलले आधारित cryptocurrency व्यापार मंच, Coinigy मोबाइल को सुरूवात घोषणा गरेको छ, एक सदस्यता आधारित iOS र Android को लागि मोबाइल cryptocurrency व्यापार आवेदन, लगभग मार्फत व्यापार एक मंच संग ग्राहकहरु प्रदान गर्न 20 भन्दा बढी डाटा जडान संग आदानप्रदान 40 आदानप्रदान.
लगभग सबै cryptocurrency व्यापार मञ्चहरूमा विपरीत, को Coinigy मोबाइल व्यापार अनुप्रयोग सदस्यता मोडेल जहाँ प्रयोगकर्ताका लागि प्लेटफर्म पहुँच र यसको functionalities दिइएको काम गर्दछ $21.95 प्रति महिना.
$ 1B आईपीओ लागि Bitcoin खानी उपकरण निर्माता कनान फाइलहरू
कनान इंक, Bitcoin खानी हार्डवेयर को संसारको दोस्रो ठूलो निर्माता, को हङकङ शेयर बजार एक सूची आवेदन पेश, यो संसारको सबैभन्दा ठूलो गुप्त आईपीओ सम्बन्धित हुनेछ.
कनान जुलाई रूपमा बित्तिकै व्यापार सुरु गर्ने लक्ष्य लिएको छ, यसबारे ज्ञान संग एक व्यक्ति भने, जानकारी निजी छ किनभने सोधेर पहिचान हुँदैन. कम्पनी, हांग्जो मा आधारित, बेचिएको 300,000 Bitcoin खानी रिसाव गत वर्ष र थियो को राजस्व 1.3 अरब युआन ($205एम). गत वर्ष भन्दा बढी, शुद्ध आय sixfold भन्दा बढी surged, मंगलवार गरेको दाखिला अनुसार.
कनान एक सुची cryptocurrency उद्योग देखि पहिलो हङकङ आईपीओ हुनेछ.
अमेरिकामा गुप्त विनिमय सुरु गर्न सामाजिक लगानी मंच eToro
eToro, सामाजिक लगानी मंच, एक cryptocurrency विनिमय र मोबाइल वालेट सुरु गरिएको छ, र संयुक्त राज्य अमेरिका मा विस्तार.
“सबै दुनिया भर उपभोक्ताहरु तिनीहरूले cryptocurrency बजार भाग लिन आवश्यक उपकरण पहुँच हुनुपर्छ, आफ्नो विशेषज्ञता बिना,” सीईओ Yoni Assia एक प्रेस विज्ञप्ति जारी मा भने.
शीर्ष cryptocurrency व्यापारीहरु eToro मा पारदर्शी आफ्नो विभागहरू बनाउन र अन्य व्यापारीहरु आफ्नो ट्रेडों प्रतिलिपि गर्न अनुमति दिएर आय कमाउन सक्षम हुनेछ.
प्लेटफर्म छ 10 बाट लाख प्रयोगकर्ता 140 देशहरूमा, स्विट्जरल्याण्ड गर्न चीन र रूस र संयुक्त राज्य बाट.
हुनत कुनै समय cryptocurrency विकल्प U.S. मा उपलब्ध हुनेछ जब लागि दिइएको थियो, eToro देश मा हरेक निर्णयाधिकार मा cryptocurrency व्यापार प्रदान गर्न योजना.
अजरबैजान कर राजस्व cryptocurrency मा प्राप्त
अजरबैजान राजस्व taxing छ cryptocurrency मा प्राप्त, Nijat Imanov अनुसार, को करहरू मंत्रालय लागि कर नीति र रणनीतिक अनुसन्धान विभाग को उप निर्देशक सामान्य, देशको रुझान समाचार एजेन्सी अनुसार.
कसैले cryptocurrency किन्छ र एक उच्च मूल्य मा यो बेच्छ भने, को लाभ आय रूपमा लिपिबद्ध र कराधान विषय छ, Imanov भने, यसलाई कानुनी संस्थाहरू लागि लाभ कर र व्यक्तिहरूलाई लागि आय कर कल.
मास्टर कार्ड गरेको CFO: Cryptocurrency खरिद हाम्रो ग्राहक खर्च बुस्टिङ छन्
मास्टरकार्ड देखेको छ ...
Blockstream को पूर्व विकासकर्ताहरूले blockchain मा एक सुपर कम्प्युटर बनाउन
सेन्ट. लुइस फेडरल रिजर्व: Bitcoin नियमित मुद्रा जस्तै छ
फेडरल रिजर्व ...
अघिल्लो पोस्ट:Blockchain समाचार 15.05.2018
अर्को पोस्ट:Blockchain समाचार 17.05.2018